Ngwa ngwa Mee Online Quiz na Quiz Onye kere Software
> Resource> Atụmatụ> Otú na Quiz Onye kere Software Mee Online Quiz
Ka anyị nile maara, online ule nwere ike mee ka a otutu uru ntule: oge ​​na-azọpụta, mgbanwe na echekwa. N'ihi na trainers na ndị nkụzi, ha na-adịghị na egbughị oge akara ule ahụ n'ihi na ule pụta ga-graded na-akpaghị aka - nnukwu oge na-azọpụta. N'ihi na ule-takers, ha nwere ike na-online ule na ha onwe ha họọrọ oge - oké mgbanwe. N'ihi na òtù, anwale online azọpụta a otutu nke na-eri iji jiri nkụzi na-emepụta na ebipụta ọtụtụ nde nke ule akwụkwọ - ọzọ echekwa.
Ya mere, anyị pụrụ ịhụ ule na-eme omume na-inweta amụba ewu ewu n'ihi ọzọ na ndị ọzọ nkụzi, trainers,-eme nnyocha na evaluators na-na mkpa nke na-eke quizzes ma ọ bụ atụ ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ trainees 'ihe ọmụma. Ekele ha, na-eme online ule na-aghọ nnọọ mfe. Ebe a isiokwu a ga-ewebata serveral ule onye ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa ajụjụ e kere eke ụzọ n'ihi na gị online ajụjụ Ndinam.
Mepụta Online Quiz na HTML ajụjụ koodu
PHP - Tutorial On Olee otú Mee a Quiz ma ọ bụ Interactive weebụ na saịtị
Mepụta Online Quiz na Usoro amụba Sites
E nwere di na nwunye nke saịtị nke enyere ọrụ kee HTML ajụjụ koodu mfe. Ihe ị chọrọ ime bụ na-ejuputa gị ajụjụ ọdịnaya dị ka kpọmkwem ụdị, na HTML ajụjụ koodu ga-eme ozugbo. Mgbe ahụ ị pụrụ idetuo na ịzọpụta koodu dị ka a HTML page (.htm, .HTML). Anyị ga-http://www.attotron.com/pub/Quizmake.htm dị ka ihe atụ iji gosi gị otú.
Nzọụkwụ 1: Tinye chọrọ ederede ọdịnaya na na mpaghara ahụ.
Nzọụkwụ 2: n'ịwa ajụjụ koodu.
Pịa Tinye Ajụjụ na ajụjụ ga-atụkwasịkwara gị ajụjụ. Pịa Mee Quiz mgbe ahụ ị ga-enweta ndị na-esonụ isi koodu.
Ugbu a, i nwere ike na-ele ajụjụ ka ego otú ọ na-arụ ọrụ.
Ọzọ site Quiz Quiz Onye kere
Mepụta Online Quiz na Online Quiz Creation Services
I nwere ike inwe akụ koodu kwuru n'elu na-ike gị HTML ajụjụ peeji, ma i nwere ike ịhụ ndị a quizzes site si akụ koodu bụ nnọọ mfe. Iji mee ka a zaa ajụjụ nke otutu ajụjụ ụdị, i nwere ime a otutu nke mmemme ọrụ. N'eziokwu, e nwere ọtụtụ ndị na saịtị nye free online ajụjụ e kere eke ọrụ nke bụ n'ezie mfe ime ka gị na ajụjụ na nọrọ n'ụlọ gị nnwale online. Proprofs ajụjụ onye (http://www.proprofs.com/quiz-school/) bụ pụtara ìhè otu na 5 ajụjụ ụdị-akwado, na foto na vidiyo nwere ike agbakwunyere ime ka ajụjụ ndị ọzọ-ekere òkè. Ihe bụ ihe ọzọ, mgbe ị rụchaa ajụjụ e kere eke na Proprofs, ị nwere ike ịkekọrịta nyere ajụjụ njikọ ndị ọzọ mfe on Facebook, Twitter, ma ọ bụ gị blọọgụ / saịtị. N'akụkụ Proprofs ajụjụ onye, ​​Quibblo na Classmarker-enye yiri atụmatụ.
Mepụta Online Quiz na Ike Software
E nwere ọtụtụ free ụzọ ike online ajụjụ, ma i nwere ike ịhụ na ajụjụ ụdị i nwere ike na-emepụta dị nnọọ nta. Proprof abịa na 5 quesiton na ụdị na-ụfọdụ isi ajụjụ e kere eke atụmatụ. Ọ na-ada bụghị ihe ọjọọ. Ma ọ bụrụ na ị mkpa ụfọdụ elu na customizable atụmatụ, ị ga-mma nweta nkwalite akaụntụ gị.
Iji mee ka ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ na ọkachamara ajụjụ, onye pụtara ìhè ajụjụ maker- Wondershare QuizCreator bụ a zuru okè ngwọta. Ọ na-enyere ndị ọrụ ike ajụjụ nke ruo 9 ajụjụ ekwekọghị. Dejupụta ubi na ajụjụ & azịza na fanye multi-media faịlụ (ọ bụrụ na mkpa), mgbe ahụ ị pụrụ-ebipụta flash ajụjụ na HTML page, na bulite na site faịlụ online ịkọrọ onye ọ bụla. Ọzọkwa, e nwere otutu ụzọ soro na-arụpụta dị otú ahụ nsuso results na email, Quiz Management ma ọ bụ òtù LMS. Site n'ụzọ, ụfọdụ ndị ọzọ na-ekwusara nhọrọ dị ka òtù LMS ngwugwu, executable faịlụ, Okwu / Excel ndị dịnụ.
Adobe Flash nwekwara ike-eji ike Flash quizzes, ma ọ bụrụ na ị bụ ọkaibe na Adobe Flash n'Ide. Ị nwere ike ịmepụta a ule na otutu ajụjụ ụdị na ihe oyiyi, ụda, na Flash fim. Ebe a bụ nkuzi banyere otú ike a ajụjụ na Adobe Flash CS4. Na-ele ajụjụ kere site Adobe Flash na bulie nri azịza ndọpụta menu.
Mepụta Online Quiz na Google Docs
Google Docs bụ kpamkpam free online ngwá ọrụ na-eduzi online multiple oke ule na nyocha. Na ya, ị nwere ike ịmepụta a multiple oke ule, akpọ ndị ọzọ òkù na-ule na mgbe ahụ ọkwa ule na-akpaghị aka na ya usoro ọrụ. Ọzọkwa, ọ nwere ike n'ịwa mmụta eserese analysis maka onye ọ bụla ajụjụ na nke ị nwere ike mara ule takers 'etoju nke nghọta maka kpọmkwem ihe ọmụma. Ebe a na-ọzọ nduzi n'ihi unu:
Eduzi na-eme ka online ule na Google Docs
Guide ịkekọrịta online ule kere site Google Docs
Guide to ọkwa na Google Docs ajụjụ na-akpaghị aka
Olee otú Mee A ngụsị akwụkwọ ngosi mmịfe